Rebooking Survivor Series 2017 - Wwe
Survivor Series 2017 dia natao tamin'ny 19 Novambra 2017, tany Houston, Texas. Ny karatra lalao dia nisy an'i Matt Hardy vs Elià, Kalisto vs Enzo Amore ho an'ny Cruiserweight Championship, Kevin Owens & Sami Zayn vs Breezango, Tompondakan'ny IC The Miz vs Tompondakan'i Etazonia Baron Corbin, The Shield vs The New Day, Women Raw an'ny ekipa vs Team SmackDown Live's Vehivavy, Tompondakan'ny ekipa SmackDown Tag Tompondaka The Usos vs Tompondakan'ny ekipa Raw Tag The Champions, Tompondakan'ny vehivavy Raw Alexa Bliss vs SmackDown Vehivavy Tompondaka Charlotte Flair, Tompondakan'ny WWE AJ Styles vs Tompondakan'i Universal Brock Lesnar, ary ny ekipa lehilahy Raw vs Team SmackDown Live's Men.
Na dia karatra tsara an-taratasy aza dia nisy olana maromaro, anisan'izany ny lalao IC vs US Titre (samy Baron Corbin sy The Miz ka tsy dia ao ambadiky ny superstar ny vahoaka), fiankinan-doha amin'ny mpamaky tapany, ary lalao maloto 5 amin'ny 5 vehivavy maloto.
Na dia tsara tarehy aza ny lalao hafa dia azo namboarina kokoa.
Fanombohana Asehoy: Tompondakan'ny Cruiserweight: Neville (c.) Vs Kalisto
Ireo superstars 2 ireo dia niatrika ny taloha.
Kalisto dia tsy nahomby tamin'ny fanamby an'i Enzo Amore ho an'ny Cruiserweight Championship amin'ny Survivor Series 2017 Kickoff Show tamin'ny lalao mandreraka. Nandritra ny famandrihako nofinofy, i Neville dia mbola tompon-daka Cruiserweight ary mbola tsy niala tamin'ny WWE mihitsy. Ho resiny tokoa i Enzo Amore tao amin'ny No Mercy alohan'ny nihaonan'ny Kalisto lalao iray tao amin'ny Survivor Series. Ireo roa ireo no cruiserweights fanta-daza indrindra tamin'ny fizarana Cruiserweight.
Kalisto dia Tompondakan'i Etazonia 2 fotoana teo aloha raha Neville kosa dia Tompondakan'ny NXT taloha. Manana tantara vitsivitsy ihany koa izy ireo hatramin'ny nahombiazan'i Neville fanamby tamin'i Kalisto ho an'ny Tompondakan'i Etazonia tamin'ny fizarana Smackdown tamin'ny Janoary 2016. Ireo mpikomy roa dia nanaporofo ny simia ary afaka manana lalao tena tsara amin'ny seho kickoff.
Miaraka amin'ny 15-20 minitra amin'ny fotoana anaovana peratra, afaka mangalatra ilay fampisehoana ireto mpiady roa ireto. Ny fifamaliana dia tokony hifarana amin'ny fihazonanan'i Neville ny Cruiserweight Championship amin'ny alàlan'ny fametahana lalao Kalisto miaraka amin'ny Red Arrow. Neville dia afaka nifindra tamin'ny mpiady hafa toa an'i Cedric Alexander sy Mustafa Ali.
omeo lohahevitra horesahiko
inona ny lolom-po amin'ny fiarahana
ahoana no milalao mafy hahazoana miaraka amin'ny sakaiza
ny fomba raiki-pitia amin'ny olona iray indray
i john cena ve any amin'ny wrestlemania 32